Fandrindrana sy endri-javatra manokana - Ellicott Dredges
Politika momba ny kalitao sy ny tontolo iainana
Dredges sy endri-javatra manokana
Dredges namboarina sy endri-javatra manokana
Ny marika Ellicott® dia manohy mivoatra miaraka amin'ny fampidirana ireo injeniera manokana sy namboarina manokana, fananganana sy ny endri-javatra namboarina manokana. Indraindray ny ekipa injeniera manan-talenta sy ny mpiasan'ny fivarotana voatokana dia nahafinaritra ny namolavola sy namorona ny sasany amin'ireo karazan-javaboary mahazatra indrindra manerantany.
Avy amin'ny dredge natao manokana mankany amin'ny lalam-pamokarana herinaratra ho an'ny fanjakana, na manao ahoana na manao ahoana lehibe na fanamby ilay andraikitra, ny ekipanay dia nanolo-tena hamoaka vahaolana mihoatra ny anton'ny fanantenan'ny mpanjifa. Amin'ny alàlan'ny asantsika amin'ny làlan-dresaka mahazatra sy fitaovana manokana, ny injeniera Ellicott dia nahazo tambazotra iraisam-pirenena 20 ho an'ny fanavaozana mifandraika amin'ny dredge.
Ny anarana marika dia manohy mivoatra miaraka amin'ny fampidirana ireo injeniera manokana sy noforonina manokana, ny fananganana sy ny endri-javatra namboarina manokana. Indraindray ny ekipa injeniera manan-talenta sy ny mpiasan'ny fivarotana voatokana dia nahafinaritra ny namolavola sy namorona ny sasany amin'ireo karazan-javaboary mahazatra indrindra manerantany.
Hizaha habe: 24 ″ - 36 ″ (610 mm x 914 mm)
Main engine: 4,700 - 16,000 HP (3,470 - 11,931 kW)
Power @ Cutter Drive: 850 - 3,000 HP
(633.84 - 2,237.1 kW)
Fihoarana ambany indrindra fandatsahana: 60 ′ - 100 ′ (18 - 30 m)
Rivotra Dragon ™ Bucketwheel Dredges
Ny dredge kambana Wheelic ™ Bucketwheel, marika Dragonic Bucketwheel, izay namboarina manokana sy natao patanty, dia natsangana tamin'ny 1976. Nanomboka teo, nanjary malaza amin'ny fanendrena harena ankibon'ny tany manerantany ny dredge Wheel Dragon ™. Ny fanampian'ny excavator bucketwheel amin'ny dredge anao dia hampitombo ny hery fanapahana sy ny famokarana amin'ny ankapobeny. Na hampiakarana ny famokarana amin'ny asa fitrandrahana fasika na hitrandrahana trona sarotra indrindra eran-tany, ny Dredge Wheel Dragon ™ no vahaolana entinao. Ny fanovana ny Wheel Dragon ™ dia afaka omena amin'ny modely dredge marika Ellicott Dragon® voafantina.
• Fitaovana fangalarana tena tsara ho an'ny fitaovana sarotra
• Ny tahan'ny fanarenana avo lenta dia manara-penitra
excavator ho an'ny fangatahana fitrandrahana maro
Coastal Dragon® Dredges
Ny famolavolana dredge an'ny Coastal Dragon® an'ny Ellicott® dia mety amin'ny fiasa amin'ny tontolo amorontsiraka. Ny dredge an'ny Coastal Dragon® dia manana spuds tilting tsy mamela hanalalaka ny trondro ambanin'ny underpass be atao ary hanohy ny asany raha miasa amin'ny làlambe misy tetezana maro. Ny fitomboan'ny freeboard dia mamela ny Coastal Dragon® hiasa amin'ny ranomasina miaraka amin'ny fivontosana tsy ampoizina na tsy tapaka. Ny famolavolana Coastal Dragon® dredge dia azo ampidirina amin'ny maodely 1170 Series Dragon® dredge ary miakatra.
Dredges an'ny herinaratra
Ho solon'ny milina maotera, Ellicott dia manolotra dredine elektrika ihany koa. Ireo dredge ireo dia mandeha amin'ny herinaratra avy any amoron-tsiraka ary mahasoa amin'ny tetikasa fampiasana maharitra.
Satria tsy misy motera diesel, ny vidin-tsolika mandeha amin'ny herinaratra dia tsy mihetsika, ary ny vidin'ny fandidiana ambany kokoa dia maimbo kokoa ny famatsiam-bola voalohany.
Ny fiara fitaterana herinaratra dia atolotra ho safidy amin'ny habe sy karazan-deta hafa vokarin'ny Ellicott.
Wheel-Dragon ™ Bucketwheel Dredge
Coastal Dragon® Dredge